Baiboly pejy 6 - Ny Baiboly
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Manaraka Farany
Jenezy toko 10 (tohiny)
16ary koa ny Jeboseana, ny Amoreana, ny Jerijeseana, 17ny Heveana, ny Araseana, ny Sineana, 18ny Aradiana, ny Semareana, ary ny Amateana. Ary nony taty aoriana niely ny fokon'ny Kananeana. 19Ka ny faritanin'ny Kananeana tafapaka hatrany Sidòna amin'ny tandrifin'ny Jerara ka hatrany Gazà, ary hatramin'ny tandrifin'i Sodoma, Gomora, Adama ary Seoima, dia hatrany Lesà. 20Ireo no taranak'i Kama, araka ny fianakaviany sy araka ny fiteniny avy, any amin'ny taniny sy any amin'ny fireneny avy.
21Dia nitera-dahy koa Sema, rain'ny zanak'i Ebera rehetra, sy zokin'i Jafeta. 22Zanak'i Sema: Elama, Asora, Arfaksada, Loda, ary Arama. 23Zanak'i Arama: Osa, Hola, Getera, ary Mesa. 24Arfaksada niteraka an'i Sale, ary Sale niteraka an'i Ebera. 25Roa lahy no zanak'i Ebera, ka Falega no anaran'ny anankiray, fa tamin'ny androny dia voazara ny tany, ary Jektàna no anaran'ny rahalahiny. 26Jektàna niteraka an'i Elmodada, Salefa, Asarmota, Jare, 27Adorama, Ozala, Deklà, 28Ebala, Amimaèla, Sabà, 29Ofira, Hevilà, ary Jobaba. 30Izy rehetra ireo dia zanak'i Jektàna. Ny tany nonenan'izy ireo dia ny tendrombohitra atsinanana hatrany Mesà manitsy an'i Sefara. 31Ireo no taranak'i Sema, araka ny fianakaviany sy araka ny fiteniny, any amin'ny taniny avy, araka ny fireneny avy.
32Ireo no fianakavian'ny zanak'i Noe, araka ny taranany, any amin'ny fireneny avy. Avy amin'ireo ny firenena niely teto ambonin'ny tany, aorian'ny safo-drano.
31Ary nentin'i Tare Abrama zanany mbamin'i Lota zafiny, zanak'i Aràna, ary Saray, vinantovaviny, vadin'i Abrama zanany; ary niara-nandeha izy ireo niala tany Ora any amin'ny Kaldeana, mba ho any amin'ny tany Kanaana. Nony tonga tao Haràna anefa izy ireo dia nonina tao. 32Dimy amby roan-jato taona no andro niainan'i Tare, dia maty tao Haràna izy.
Jenezy toko 12
Fiantsoan'Andriamanitra an'i Abrama ho any Kanaana - Ny nivahinianan'i Abrama tany Ejipta.
1Hoy Iaveh tamin'i Abrama: Mialà amin'ny taninao sy amin'ny fianakavianao ary amin'ny tranon-drainao mba ho any amin'ny tany hasehoko anao.
Pejy: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Manaraka Farany
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.3481 seconds